Tube Machine Jarida Laser - Laser Golden
Laser Label Machine Jarida Die
Tube / Jarida tuuboyinka
Tube Machine Jarida Laser
Dhererka Tube: 6/8
Dhexroor Tube: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
CNC xakamaysada ah: Germany PA HI8000
Noocyada Khusayso tube: tube Round, tube square, tube qaab, tube gadood, steel D-qaabeeya, steel T-qaabeeya, steel H-qaabeeya, steel channel, steel xagasha, iwm
Qalabka lagu dabaqi karo: ahama, steel carbon, steel galvanized, copper, aluminium, naxaas ah, waxaaga, iwm
Qaabeeyaan No .: P2060
miisaanka loading ugu badnaan: 25kg / m
dhexroor Tube: 20-200mm
dhererka Tube: 6000mm
P2060 / P3080 tube Mashiinka goynta laser soo saartaa qaybo ka mid tayo sare leh in noocyo kala duwan oo qaabab iyo qiyaaso. By isticmaalaya ay technology goynta fiber laser, geedi socodka badan oo la isku dari karaa mid mashiinka. Tan iyo qaybo badan oo u baahan hababka kala duwan, sida rinjiga leh dhaqanka, qoditaanka, machining, feer iyo xardho, P2060 / P3080 Mashiinka goynta fiber tube laser samayn kartaa oo dhan of hawlgaladaa on mashiinka hal.
The laser mashiinka goynta tube ku qalabeysan yahay preload gacanta in uu soo bandhigayaa tube si operator kan waa ka dibna ku rid tube galay mishiinka iyo gacanta adkayn Chuck ah. Isku hababka oo dhan hal mashiinka badbaadiyay waqti iyo kharash markii tuubooyinka baaraandegidda ee yaalla waaweyn weli miday mishiinnada u ogolaataa user in ay si fudud u dhigi prototypes ama wax soo saarka Dufcaddii yar.
Tani magaabay wiil laser tube sidoo kale isticmaalaan servos xawaaraha sare for qaabkaaga degdeg ah oo sax ah taas oo hoos u wakhtigii loogu talagalay dhaqdhaqaaqa non-qiimaha ku daray. Kuwani servos xawaaraha sare ee lala laser ah fiber awood yareyn kartaa jeer qayb ka jarida iyo kordhiyaan wax soo saarka jidaynayey laabto sare on maalgashiga for user dhamaadka.
Tani magaabay wiil tube laser waxaa sidoo kale ku qalabaysan a xero buuxa si loo hubiyo in shaqaale tahay mid nabdoon halka mishiinka waa firfircoon.
HORREEYA laser ku siin doonaa adeeg buuxa iyo taageero our mashiinada laser , oo ay ku jiraan stock buuxda oo dayactir iyo qaybaha si loo hubiyo in macaamiisha our si dhakhso ah oo wax ku ool ah ka heli qaybo ka bedelka.
Tube goynta laser mashiinka muuqaalada
Chuck iyo taageero isku haysa hagaajin qalab qaadista mooyee waqtiga quudinta, loo hubiyo concentricity, hortago Escuardo biibiile.
tube iskaanka Automatic.
Si toos ah Xarunta Raadi
Kordhi wax soo saarka, hubiyo tayada alaabooyinka.
Mark qaybo iyo goynta track.
Corner System Fast Jarida
jawaab geeska Fast, si weyn u hagaajinta jarida hufnaan.
Dheellitir Speed ​​ayaa si toos ah
In xaaladda goynta degdeg ah, waxaa ku gaari kartaa tayada goynta waara.
Save shaqada iyo ka hortagga workpiece ka la xoqo.
taasoo keentay resonator fiber laser dunida iyo qaybaha elektaroonik ah si loo hubiyo in mashiinka xasiloonida ka xoogbadan.
nidaamka ku tirtirayaan Chuck Advanced
Chuck xarunta is-qabsiga, si toos ah habaysaa xoog ku tirtirayaan sida caddaymaha profile si loo hubiyo in tuubada dhuuban aan waxyeelo.
chucks sabab Dual lihin noocyo kala duwan oo tuubooyinka uma baahna si uu u bedelo ama la qabsato daamanka.
Long haysa stroke. Marka dhexroor biibiile waxaa bilowda gudahood 100mm, ma jirto baahi loo qabo in la qabsato haysa.
xirid dhidibka Multi-
dhidibka Multi-(quudinta dhidibka, dhidibka wareeg Chuck iyo madaxa goynta laser) xirid lagu jiro dhaqdhaqaaqa madaxa goynta.
qalab ururinta Automatic
Qalabka taageerada sabayn ururiya tuubooyinka dhammeeyayna ay si toos ah.
Taageerada sabayn gacanta motor Howlsocodsiinta oo ku qabsato karaa dhibic taageero sidii dhexroor biibiile si deg deg ah.
The taageero guddi sabayn qaban karto biibiile dhexroor weyn oo si adag u xidh.
Taageerada sabayn Automatic
Sida laga soo xigtay isbedelka of aragti biibiile, height taageero si toos ah hagaajin karo in waqtiga dhabta ah si loo xaqiijiyo in xagga hoose ee beebka had iyo jeer lagama sooci karo sare ee usheeda dhexe taageero, taas oo kaalin ee dynamically taageeraya tuubooyin ka.
aqoonsiga tollayn alxanka
Mawqifka kama tollayn alxanka biibiilaha la cayimi karo si loo hubiyo in booska goynta fogaado tollayn alxanka lagu jiro processing iyo ka fogaadaan dhibaatada engeeg godad at tollayn alxanka.
Waayo, biibiile xodan iyo maroorsamaan, shaqo la saxo si toos ah ay ogaadaan kartaa search ku laayeen segmented, oo si toos ah loo saxo weecasho si aad u hesho dhibic xarunta biibiilaha qalooca ee jarida si loo hubiyo sax goynta.
Marka jarida in qaybtii ugu dambaysay ee tuubada, daamankiisa Chuck hore waxaa si toos ah u furay, oo daamankiisa Chuck danbe dhex mari Chuck hore si loo yareeyo aagga jarida indha la '.
dhexroor Tube ka yar 100 mm iyo Ture qalabka 50-80 mm
dhexroor Tube ka badan 100 mm iyo Ture qalabka 180-200 mm
Optional - dhidibka saddexaad nadiifinta qalabka derbiga hoose
Sababo la xiriira habka laser goynta, slag ka ciday u hoggaansamaan doonaa in qayb ka mid ah derbiga gudaha biibiilaha ka soo horjeeda. Gaar ahaan, qaar ka mid ah tuubooyinka la dhexroor yar yar waxay leeyihiin doonaan slag ka badan. Waayo, qaar ka mid ah codsiyada ka badan culus, qalabka usheeda dhexe helo saddexaad lagu dari karaa si looga hortago in slag ka hoggaansanaayeen derbigii barxadda gudaha.
Tube laser software Mashiinka goynta
Jarmal software gacanta PA
Mid ka mid ah bogga dhameystiraya user-saaxiibtinimo oo dhan hawlaha ka badan!
Si dhakhso ah u astaysto interface ah, sahlan!
Ku dar ah interface cudurka madax banaan inay si dhakhso ah dhibta dhibaatooyin on-site, ka maskax!
Lantek Flex3d taageertaa noocyo kala duwan oo nooc biibiile
nooca Standard tube: tube Round, tube square, tube nooca-OB, tube nooca D-, tube-xagalka, tube gadood, iwm
Oo gaarka ah-qaabeeya biibiile of dhexroor siman.
Isla mar ahaantaana, flex3d ayaa modules functional for goynta profile , taasoo jari karaan steel xagasha, steel channel iyo steel H-qaabeeya, iwm
noocyada Khusayso of tube goynta laser
nooca Standard (nooca xiran)
tube Round, tube square, tube qaab, tube elliptical, tube gadood, tube nooca D-, tube Saddex Xagalka ...
nooca qaybsan (nooca Non-xiran)
steel Channel, U-birta, steel xagasha, nooca T-, nooca H-, lath steel ...
Laser-baarka tube goynta
Fiber Laser tuuboyinka / Tube Goynta Machine Technical dhimaya
Qaabeeyaan NO .: P2060 / P3080
dhererka biibiile 6000mm / 8000mm
dhexroor biibiile 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
il laser IPG / nLIGHT fiber laser
xawaaraha boos ugu badnaan 90 / min
Tube Jarida Laser Industry Codsiga Machine
Alaabta guriga, qalabka caafimaadka, qalabka taam, shidaal, bandhigay shelf, beeruhu, buundada, maraakiibta, qaybo ka mid qaab-dhismeedka, iwm
Laser Tube Goynta Machine Codsiga Waxyaabaha
Round, square, laydi, gadood, tube wareega dhexda iyo biibiile oo kale biraha.
<< Read More saabsan Tube Muunado Jarida Laser
laser Fiber dhumucdiisuna bir goynta awoodaha laser kala duwan
3000W Fiber Laser Goynta Machine la Double sariirtaada Sarrifle
Fiber Laser Goynta Machine la Double sariirtaada baddali High Speed ​​Format Large Full xiran Nooca Laser Power: 3000 watts sariirtaada shaqeeya ...
1200W CNC Fiber Laser Goynta Machine for Sheet Birta
sheet Jarida oo dhumucdiisuna waxay ugu badnaan bir ah 14mm steel carbon, steel 6mm ahama, aluminium 4mm, steel galvanized 4mm, naxaas 4mm, copper 3mm
Model No.: GF-1530 - 700W
Nooca Open 700W CNC Fiber Laser Goynta Machine for Birta Sheet
Goynta badnaan steel carbon 10mm, ahama 4mm, aluminium 3mm, steel galvanized 3mm, naxaas 3mm, copper 2mm
Label Laser dhinta magaabay